Sheeg wixii ku saabsan qorshayaashayada dib-loogu-qaabayn doono xarunta macaamiisha ee Xarunta Civic Center Survey
Sheeg wixii ku saabsan qorshayaashayada dib-loogu-qaabayn doono xarunta macaamiisha ee Xarunta Civic Center
Shaqada Xarunteenna Ciciv Center ee fool ka foolka ah ayaa loo xiray Covid-19 dartiis. Kahor furitaanka Xarunta Civic Center, Goluhu wuxuu sameynayaa qorsheyaal si uu ugu wareejiyo adeegyo badan khadka tooska ah, taageerida kuwa leh arrimaha helitaanka dhijitaalka ah isla markaana soo bandhigaya talaabooyinka fogeynta bulshada. Waxaan qorsheyneynaa in dib loo furo adeegga cusub Diseembar 2020 waxaanna jeclaan lahayn inaan maqalno aragtidaada ku saabsan fikradaheenna.
Sababta aan ugu talagalinayno inaanu badalno
Dadka deegaanka ayaa noo sheegay in Xarunta Rayidka ay aheyd mid buuq badan, aad u furan, oo ay adkeyd in la ogaado halka la aadayo. Tirada badan ee soo booqdeyaasha sidoo kale waxay nago adkaysay sidii aan u bixin lahayn adeeg joogto ah oo tayo sare leh kuwa ugu baahan caawimaadeena.
DIntii lagu jiray xiritaanka, goluhu wuxuu soosaaray qaabab dadka deegaanka iyo ganacsatada ay noola soo xiriiri karaan ayadoon loo baahneyn inaan soo booqano, inta badan taleefan iyo wicitaano telefan, iyo emayl. Waxaan sidoo kale maalgelin ku sameyneynaa websaydhkeena waxaanan wanaajineynaa xarunteena wicitaanka si ay ugu fududaato macaamiisha inay helaan macluumaadka ay ugu baahan yihiin si dhakhso leh.
WWaxaan aaminsanahay haday inta inbadan dadku ka qaban karaan guriga, sida ugufiican ay u habboon tahay, iyo maxaa yeelay adeegyada lagu bixiyo websaydhka iyo taleefanka ayaa uga jabaan konsalka bixinta adeegyo fool ka fool ah, waxay ka caawineysaa golaha inuu badbaadiyo lacag ay dib ugu soo ceshan karaan adeegyo kale oo bulshada Lambeth u baahan tahay.
Waxaan qorsheyneynaa inaan bedelno
OSoojeedinteenna ayaa ah in adeegga fool ka fool cusub la siin doono gaar ahaan kuwa:
Ay aad ugu adag tahay ama aan suurtagal ahayn in la helo adeegyada golaha shabakadda ama taleefanka, oo aad u baahatid taageero quf-iyo-quf ah, sababo ay ka mid yihiin Ingiriisiga oo aan ahayn luqadda koowaad, xaaladaha caafimaadka maskaxda, dhibaatooyinka xagga barashada, dareenka ama laxaad la’aanta hadalka.
Aan ku haysan kombiyuutarro iyo iskaan-gooyeyaal guriga ah, ama u aahan caawimaad si aad u isticmaasho Iyaga ayaa halis ugu jira hoy la’aan
isticmaasho Iyaga ayaa halis ugu jira hoy la’aan
Ballan ka qabso adeegga golaha
Tani waxay awood u siineysaa adeegga inuu bixiyo adeeg tayo sare leh iyo qaab shaqsiyadeed macaamiil yar oo
macaamiishaa intii ka horeysay. Waxaan qorsheyneynaa inaan dib-u-habayn ku sameyno dabaqa hoose ee Xarunta Civic Centre oo aan maalgelinno shaqaalaha iyo teknolojiyadda si aan u bixin karno:
Jawi soo dhaweyn , nabdoon oo xasilloon leh
Isgaarsiinta iyo calaamadaho waadix ah oo ku saabsan sida aan wax u sameyno
wanaajisay asturnaanta macaamiishayada
Shaqaale si heer sare loo tababaray oo bixin doona adeeg tayo sare leh oo daryeel macaamiisha ah isla markaana sifiican uga jawaabaya baahiyo kala duwan oo shaqsiyeed
Kobciyay teknolojiyad si ay ugu suurtageliso macaamiisha inay u isticmaalaan adeegyada si fudud
Meel daboosha baahiyaha kuwa dhaqdhaqaaqa liita qaba
Meel sugaysa amnigaaga iyo kahortaga faafitaanka fayrasyada
Sahankan wuxuu ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan xiriirka aad la leedahay adeegyada Golaha Lambeth, qaababka aad ula xiriirto aad isticmaaleyso, iyo isbeddelada aan dooneynno inaan ku sameeyno adeeggan iyo qaabka iyo qaabeynta booska. Wa inaanay qaadan wax aan ka badnayn 15 daqiiqo oo waxaan dooneynaa inaan natiijada u isticmaalno inaan kor ugu qaadno soo jeedinteena. Waad ku mahadsantahay ka qeybqaadashadaada!